Mikoropaka manangon-drano ny rehetra : tafakatra hatrany amin’ny 60.000 Ar ny vidin’ny sinibe | NewsMada
Mikoropaka manangon-drano ny rehetra : tafakatra hatrany amin’ny 60.000 Ar ny vidin’ny sinibe
Par Taratra sur 18/01/2017
Nanaitra ny mponin’Antananarivo ny fandrenesana ny filazan’ny Jirama fa efatra andro sisa ny famatsiana jiro sy rano miainga avy eny Mandroseza. Omaly, nanangon-drano ny isan-tokantrano. Nanampy ny sinibe fitehirizan-drano ny sasany hahafahana mitahiry rano betsaka ho azo ampiasaina. Filaharambe ny teny amin’ny paompy. Tsy toy ny mahazatra fa avo roa heny ny filaharan’ireo daba mavo sy kalesy mpitatitra rano. Nandeha ihany koa ny tsenan’ny sinibe manga izay nahavatra nitety tanàna mihitsy.
Tafakatra hatrany amin’ny 60.000 Ar ny vidin’ny sinibe iray raha 30.000 Ar izany teo aloha. Manararaotra ny fahaporetan’ny olona ny mpivarotra. Nidangana hatrany amin’ny 600 Ar isaky ny daba mavo ihany koa ny vidin-drano ho an’ireo mpivarotra rano manosika kalesy manatitra isan-tokantrano. Tsy mbola niakatra kosa anefa ny vidin-drano mivantana eny amin’ny paompy.
Tsy naharaka hatramin’ireo mpikarama mivaro-drano, omaly. Na ireo ankizy madinika aza lasa nilahatra teny amin’ny paompy nikarama nitatitra ranon’olona. Nahavatra tsy nianatra mihitsy ny sasany fa lasa nikarama. Izay vao tena ho fahirano ara-bakiteny Antananarivo sy ny manodidina raha tsy mamatsy rano intsony ny farihin’i Mandroseza. Sady tsy hisy rano hosotroina no ho maizina ny tanàna. Efa misy ihany tokantrano mampiasa angovon’aratra avy amin’ny masoandro na rivotra, saingy vitsy izy ireny. Tsy mbola takatry ny fahefa-mividin’ny maro rahateo ny vidin’ny fitaovana afaka mamatsy fitaovana iray manontolo ao an-trano.
Ny hazavana amin’ny alina mety ho vitan’ny labozia ihany fa ny rano hosotroina mihitsy no tena zava-doza raha tena ho tapaka tanteraka tokoa ny famatsian-dranon’ny Jirama.